I-Fujian JinJiang AOMING yoshicilelo lokudluliselwa kobushushu Co, Lld.Yasekwa nge-1 kaJuni ngo-2016. I-AOMING ineqela labancinci kunye namalungu eqela leengcali.Iimveliso ze-AOMING zokuhambisa i-thermal zisetyenziswa ngokubanzi kwiiMpahla, iingxowa, izihlangu, izincedisi, njl., idibana neziqinisekiso eziphezulu zeshishini ezifana ne-Oeko-Tex Standard 100 Class 1, BV.
Nikeza okona kulungileyoisisombululo
Inkampani inesisombululo esipheleleyo senkqubo yeteknoloji yokudlulisa ukushisa (ukubonelela ngokubanzi, ukusebenza okuphezulu, iimveliso ezicwangcisiweyo ezicwangcisiweyo kunye neenkonzo zobugcisa ngokweendwangu ezinxulumene nabathengi, ukuhlamba kunye nezinye iimfuno).
I-AOMING inenkqubo epheleleyo yokubonelela (uphando kunye nophuhliso, ii-odolo, iFactory, inkonzo, kunye nokuthunyelwa), kunye nomgangatho obalaseleyo, impendulo ekhawulezayo, kunye nomthamo ozinzileyo wokubonelela, idlala indima ephambili kwiimpahla ezininzi zeGarments Manufactory ezifana neShenzhou, Uniqlo, kwaye ethandwa kakhulu ziibrendi zodidi lokuqala ezifana ne-ADIDAS NIKE PUMA.
I-Oeko-Tex Standard 100 luphawu lwentengiso olubhalisiweyo oluphuhliswe yi-International Association for Research and Testing in the Field of Textile Ecology (Oeko-Tex).Isetyenziselwa ukufumanisa ukuba iingubo kunye neengubo zinezinto ezinobungozi ezichaphazela impilo yabantu, ukuqinisekisa ukuba iimveliso aziqulathanga okanye zikhuphe izinto ezinobungozi ezifana nesinyithi esinzima, i-fumarin, i-amines enevumba elimnandi, njl. , Ukudibanisa ngokuthe ngqo kwesikhumba (iKlasi 2), akukho qhagamshelwano oluthe ngqo nolusu (iKlasi 3) kunye nezinto zokuhlobisa (iKlasi 4).Udidi loku-1 ngowona mgangatho ungqongqo, kwaye olu vavanyo lumele iimveliso ze-AOMING ezingenabungozi kwiintsana ezineminyaka eyi-0-3 ubudala.
Umatshini wokushicilela ozenzekelayo, umatshini wokusika ufe, umatshini wokusika, umatshini wokuchwela, umatshini welaser, umatshini wokushicilela wedijithali
I-AOMING iphumelele ukuqatshelwa kunye nokuthenjwa kweempawu ezininzi zamazwe ngamazwe ezaziwayo kunye nemizi-mveliso yelaphu ngokugxininisa kwiinkonzo zobungcali, kwaye iye yaba ngumthengisi we-NIKE, i-Adidas kunye nezinye iimpawu eziphambili, ezithatha indawo ebalulekileyo kwimarike yempahla yempahla yehlabathi.
Inkqubo yonikezelo lwe-one-stop.
Ukususela kwi-oda (ukwenza ngokwezifiso), ukucaphuna, ubungqina, ukuveliswa kwefektri, ukuthunyelwa, kunye nengxelo emva kokuthengisa, i-AOMING inenkqubo epheleleyo yokubonelela, kunye nenkqubo yonke eneenkonzo ezilungiselelwe.
Ubushushu Cinezela iTagless Labels Iileyibhile zokuTshintshela ubushushu UYilo lwehempe yokuCofa ngobushushu Isublimation yoShicilelo lweHeat Press ITagless iileyibhile zokuTshintshela ubushushu Tee Shirt Press